ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “တော်လှန်ရေးသမားနှင့် ဝေဖန်ရေး”
ကျနော်တို့အားလုံးသည် မိမိတို့လွတ်မြောက်ရေးအတွက် သူတပါးကယ်တင်မှုကိုသာ ထိုင်စောင့်မနေဘဲ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ပါဝင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်သင့်ပေသည်။
Everybody have to do whenever they can.
Tavoy Gyi said...
သင့်လဲ၊ကူးပြောင်းနိုင်မလဲ လို့ တွေးမိတယ် ဗမာ့သမိုင်းမှာလည်း ငါတို့ ကတော်လှန်ရေး သမားတွေဆိုပြီး လွတ်လပ်ရေးအရမှာလုပ်လိုက်
သူတို့ ထက်ဆိုးတဲ့လူတွေ စစ်ဗိုလ်တွေလက်ထဲ
Oriented ,Administration ကဒီထက်
ပိုခက်သလားလို.ဘဝ တစ်လျှောက်လုံး.. နှစ် ၆၀
ခိုင်မာတဲ့..Civil Administration မျိုး
၁။ ။စစ်အာဏာရှင်အုပ်စု ၇ဲ. ယုတ်မာရက်စက်ရမ်းကားမှုတွေ ကို ခဏလောက်လျှော့ ပီး မရေးဘဲမနေပါနဲ.။၈၈၈၈ ကနေ ကနေ.အထိ ဖိနှိပ်မှုတွေ က ရပ်မှမသွားတာကို။ပိုပိုဆိုးလာတာကို။(ဥပမာ--အောင်လံလယ်သမားများအမှု)
၂။ ။အတိုက်အခံ အစား တော်လှန်ရေးသမား အမည်ရွေ့းချယ်မှု ကို ထောက်ခံပါတယ်။
၃။ ။ ပြည်တွင်းပြည်ပ ၊ပါတီ၇ှိ၊ပါတီမဲ့ တော်လှန်ရေးသမား (စစ်စစ်)အများစု ဟာ တတ်နိုင်သလောက်၊စွမ်းနိုင်သလောက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်။ ကလောင် ပိုင်သူက ကလောင်ကိုင်၊ ကာတွန်း ကျွမ်းသူက ကာတွန်းဆွဲ၊ သေနတ် ကိုင်တဲ့လူက သေနတ်ကိုင်၊ အားလုံးလေးစားဂုဏ်ပြုစရာ လုပ်နေကြတာပါဘဲ။(ဖိနပ်နဲ.ပေါက်ခွင့်သာသူက ပေါက်ပေါ့ဗျာ)။
၄။ ။ဘလောက်ထဲရေးနေကြတာကိုတောင် Electronic Revolution လို. ဘလော့ဂါကြီးတယောက်ကိုယ်တိုင် သူပိုင်ဘလော့မှာ အငေါ်တူးသဗျ။(သူ ဘာလို. ဘလော့ ထောင်တယ်ဆို တာ ညာဏ်မမှိလောက်အောင်ဘဲ)။
၅။ ။လက်ရုံးများမြောင်၊ညာဏ်များမြောင်ဖြင့်၊ညီညီညွတ်ညွတ် လုပ်ကြရင် မကောင်းပေဘူးလားဗျာ တို.။
၆။ ။သူတပေါက် ငါတပေါက်နဲ. နအဖ ဒူး ဗုံတီးနေပီ ခင်ဗျ။
၇။ ။ဘုံရန်သူ ထင်းထင်းကြီး တွေ.နေရတာ အနှစ် ၅၀ ပြည်.တော့မယ်ဗျာ။
မြန်မာ ပြည်ရဲ. ဒုတိယ လွတ်လပ်ရေး ရဘို.ရာက မြန်မာ ပြည်သူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ် ။
ပါတီဝင်မှ...တော်လှန်ရေးလုပ်မှ မဟုတ်ပါ ။
ပြည်တွင်းပြည်ပ မှာရှိတဲ. ဒီမိုကရေစီ လွတ်လပ်ရေး ကိုတကယ် လိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ. လူတဦးချင်းရဲ. တာဝန်ပါ ။
တခုပြောစရာ ရှိတာက မြန်မာပြည်သူတော်တော် များများက မသိလိုက်ဖါသာ နေတဲ.သူတွေ များနေလားလို.ပါ။
ဒါမှမဟုတ် ပီပီပြင်ပြင် ဦးဆောင်နိုင်မဲ.ခေါင်းဆောင် ကို မျှော်နေကြတာလား ။
ပြည်တွင်းပြည်ပ မှ ပြည်သူ အပေါင်း ကြောက်ရွံချင်း မှ ကင်းဝေးကြပါစေဗျာ ။
“ဝေဖန်ခံနိုင်ရမည်” ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နည်းနည်းဝင်ပြောချင်ပါတယ်။ ဝေဖန်ခံနိုင်ခြင်းဟာ transparent ဖြစ်ခြင်း၊ ဖုံးကွယ်ထားမှုမရှိခြင်းတို့ ကိုပြဆိုတာမို့ တကယ်လိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းပါ။ ဒီနေရာမှာ ဝေဖန်ကြတဲ့အခါ လုပ်နည်းကိုင်နည်းမှားနေတာမျိုးကို လူကြီးလူကောင်းဆန်ဆန်ထောက်ပြ ဆွေးနွေးဝေဖန်ကြတာမျိုးပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်။ မဟုတ်ပဲ ကွယ်ရာကနေ လူအများထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် ခနိုးခနှဲ့ သဘောမျိုးတွေပြောကြ လုပ်ကြတာတွေက ကျတော့ လိုက်ရှင်းပြခွင့်မရပဲ သက်သက်မဲ့ အထင်လွဲခံရ နစ်နာရတာတွေမို့ လို့ ၊ အဲဒါမျိုးကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ခံနိုင်ရည်ရှိသင့်ကြလဲ သိရင်ရှင်းပြပါဦး။ အမှန်တော့ မကောင်းတာကို မကောင်းဘူးလို့ မသိကြ၊ မပြောရဲကြ၊ အားနာကြ၊ မဝေဖန်ရဲကြတော့ လုပ်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ ပဲ မဆိုင်တာတွေ ပြောကြလုပ်ကြတာတွေ ရှိကြပါတယ်။ ဘယ် နယ်ပယ်ရယ်လို့ တော့မဟုတ်ပါဘူး။ နေရာတိုင်းမှာပါ။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှုမရှိရင်၊ မခံနိုင်ရင် တိုးတက်မှုရှိဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ အဖျက်သဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှုတွေ မရှိရင် ယဉ်ကျေးသာယာတဲ့လူ့ အဖွဲ့ အစည်းဖြစ်လာကြမယ်။ တစ်ခုနားမလည်တာက အဖျက်သဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်မှုကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြရင် ယဉ်ကျေးကြမလဲဆိုတာပါ။ ကျေးဇူးပါ။
ရှင်းနေတာပဲဟာ။ ငတ်နေလို့ပေါ့။ ဒင်းတို့ကလည်း ကျွမ်းမှကျွမ်း။ ငတ်ပြတ်သွားအောင်ကို လုပ်ပလိုက်တာကလား။ ဒီထက်ပိုမငတ်အောင် အငတ်ပြသနာ အရင်ရှင်းနေရတာနဲ့ပဲ လုံးပါးပါးနေပါပေါ့လေ။ ငတ်ဆိုလို့ ထမင်းငတ်တာပဲလာမြင်နေအုံးမယ်။ အစစ ငတ်ခဲ့ရတာလေဗျား။ သိပါတယ်။
Quote "တခုပြောစရာ ရှိတာက မြန်မာပြည်သူတော်တော် များများက မသိလိုက်ဖါသာ နေတဲ.သူတွေ များနေလားလို.ပါ။"
ယုဝရီ .... (quote) "မဟုတ်ပဲ ကွယ်ရာကနေ လူအများထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် ခနိုးခနှဲ့ သဘောမျိုးတွေပြောကြ လုပ်ကြတာတွေက ကျတော့ လိုက်ရှင်းပြခွင့်မရပဲ သက်သက်မဲ့ အထင်လွဲခံရ နစ်နာရတာတွေမို့ လို့ ၊ အဲဒါမျိုးကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ခံနိုင်ရည်ရှိသင့်ကြလဲ သိရင်ရှင်းပြပါဦး။" (end of quote)
အဲသည်လို အဖြစ်မျိုးတွေက နေရာတိုင်းမှာ ရှိတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကောင်းရင် ခေါင်းဘယ်မရွေ့ဆိုတဲ့ စကားကိုပဲ လက်ကိုင်ထားရမှာပေါ့။ အထင်ရှားဆုံး ဥပမာတခု ပေးရရင်.... မြန်မာပြည်မှာလည်း အစိုးရပိုင် သတင်းစာကြီးများကနေ အမျိုးသမီးတယောက်ကို ဒီလိုပဲ ရစရာမရှိအောင်၊ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် မနားတမ်း ရေးသားခဲ့ကြတာပဲ မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် ကာယကံရှင်က သူတို့စွတ်စွဲတဲ့အတိုင်း ဖြစ်မနေတဲ့အခါ စွတ်စွဲသူတွေမှာသာ နိမ့်ကျသွားတယ်။ ကာယကံရှင်ရဲ့ အသရေကတော့ စိုးစဉ်းမျှ နွမ်းပါးသွားခြင်း မရှိပါဘူး။
လူတိုင်းမှာ.. စာဖတ်သူတိုင်းမှာ... ဆင်ခြင်တုံတရားရှိတယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ ခံယူထားလိုက်ရင် ဒီပြဿနာမျိုးက အလိုအလျောက် ပြေလည်သွားနိုင်ပါတယ်။
2010ရွေးကောက်ပွဲကိုဆန့်ကျင်တာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့လူတွေကို အချောင်သမားလို့ စွပ်စွဲတာ ကလွဲရင် ဘာမမလုပ်တတ်တော့ဘူးနဲ့တူတယ် ကိုယ့်ဘက်မှာဘာအားသာချက်မှမရှိပဲနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်စစ်တပ်ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်မှာလဲ သူတို့ကအသာစီးရနေတာ အဓိကလုပ်ရမှာက election fair ဖြစ်ရေးတောင်းဆိုရမှာ အဲလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ constitution မပြင်ရင်မဝင်ဘူးဆိုလိုကတော့ စစ်တပ်ကသူ့လူနဲ့သူ့ဇတ်ကပြီး ကျုပ်တို့နိုင်ငံ တရုတ်ပြည်လိုအာဏာရှင်စနစ်နဲ့ အသားကျတဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်လုပ်တာကို ဒီအတိုင်းထိုင်ကြည့်နေရမယ်
ကွန်မင့်လေးတွေလဲ ကောင်းတယ် ..း))
ကျနော်က ကိုပေါရေးတဲ့ စာပေတွေကို ဖတ်ရူနေကြ ပရိသတ်တစ်ဦးပေါ့၊ ဘလော့လည်း ရေးပါတယ်၊ ကိုပေါ
အခုဆိုလိုလိုက်တာ ပြည်တွင်း၊ လက်နက်ကိုင်နှင့် ပြည်ပ
လို့ သိရပါတယ်၊ ပြည်တွင်း ... ကိုပေါ မြန်မာပြည်မှာ
နေခဲ့စဉ်တုန်းက နိုင်ငံရေး အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ အစိုးရဆန်
ကျင့်ရေး နယ်ပယ်တွေ၊ သို့မဟုတ်ရင်လည်း တခြား
ဘယ်လောက်များ လုပ်ခဲ့ဘူးပါသလဲ၊ ပြီးတော် လက်နက်
ကိုင် တော်လှန်ရေးနှင့် နယ်စပ် သဘောတွေ ဘယ်
လောက်သိပါသလဲ၊ ဥပမာ ... ကျနော် ဆိုလိုတာ က နယ်စပ်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေဘဲ နေတယ်၊ နယ်စပ်မှာ တော်လှန်ရေး လုပ်မယ်ဆိုရင် သူတို့နဲ့ ဆက်ဆံရမယ်၊ သူတို့ ထောက်ခံမှုပါမှ လုပ်လို့ရမယ်၊ နယ်စပ်မှာ မြန်မာပိုင် နယ်မြေ မရှိဘူး
ဗျာ၊ ကရင် မွန် အစရှိသူတွေက ပေးမှ ကျွှေးမှ စား
ဖို့ တိုက်ဖို့ ဖြစ်မယ် အများကြီးပဲ၊ သူတို့နဲ့ အဆင်
မပြေရင် ထောက်လှမ်းရေး ခေါင်းစဉ်တပ် အသတ်ခံ
ရနိုင်တယ်၊ ဥပမာ ... ကရင်လူမျိုးတွေက သူတို့
ကလေးတွေ အငိုတိတ်အောင် ... ဗမာ စစ်သား
လာနေပြီ... ဗမာ လာနေပြီလို့ မမြင်ဘူးတဲ့ အရာ
ကို တစ္ဆေလို ကြောက်အောင် သင်ကြားတာ၊ အဲလို
မျိုးတွေ အများကြီး ရှိတယ် ကိုပေါ၊ ပြည်ပမှာလည်း
ထားပါတော့ ကိုပေါတို့ သိထားတာ အမေရိကားနဲ့
ဥရောပကို UNHCR နဲ့ သွားကြတယ်၊ အဲဒီမှာလည်း
နိုင်ငံရေးသမား တစ်မျိုးတည်း မဟုတ်ဘူး၊ စစ်ပြေး
တွေ၊ လူမျိုးရေး ဒုက္ခသည်တွေ ပါတယ်ဗျ၊ ပြီးတော်
တချို့လူတော်တော်များ ပြောကြတယ်၊ ဘာတဲ့ နိုင်ငံ
ရေးကို လုပ်စားတယ်၊ အဲဒီစကားတွေ စောက်ရူးတွေ
ပြောတာ ဘယ်နေရာမဆို ထမင်းစားဖို့ အလုပ်လုပ်
ရတယ်၊ ထောက်ပံ့ကြေးဆိုတာ စားလောက်ရုံ ပဲ ရ
တာ၊ ဒါလည်း အများကြီး မပေးဘူး၊ အမြဲ မပေးဘူး၊
အဖြူကောင်တွေ စောက်ရူး မဟုတ်ဘူး ကိုပေါ၊
လိုင်းစုံက လူစုံတွေ အများကြီး၊ နိုင်ငံသမား တော်
လှန်ရေးသမားဆိုတာ ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက် ရှိလဲ
ကိုပေါ သေသေချာချာ လေ့လာပြီးသွားပြီလား၊ ကျနော် က ကိုပေါ ခင်ပါတယ်၊ ဒါတွေကို ကိုပေါ
အရင် လေ့လာပါအုံး၊ ဝေဖန် မစောနဲ့လေ၊ တချို့
လည်း နယ်စပ်မှာ တော်လှန်ရေး လုပ်နေတယ် ပြော
တာ သူတို့ အလံစိုက်ပြီး အလေးပြုနေတာ မြန်မာ
ပြည်ထဲမှာ မဟုတ်ဘူး နယ်စပ်စည်း ဟိုဖက် ထိုင်း
မြေထဲက လယ်ကွက်ထဲမှာဗျာ၊ အမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာ၊ ကျနော့်လည်း ဝေဖန်လုပ်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစား
ဖူးပါတယ်၊ အဲဒီက က မြန်မာနိုင်ငံသား အများစုက
ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်တာ၊ ကျနော် ဆို
လိုချင်တဲ့ သဘောက လူအများစု တစ်ခုခုဖြစ်လာ
ရင် ကောက်ရိုးမီးလို့ ဟုန်းကနဲ လောင်းတယ်၊ သို့ပေမဲ့ အားလုံးအတွက် စနစ်တကျ လုပ်မယ်၊တော်
လှန်မယ်၊ သတ်စရာ ရှိတာ သတ်မယ်ဆိုရင် (တော်
လှန်ရေးမှာ သတ်စရာ ရှိတာ သတ်ရတယ် ကိုပေါ)
ကံ ကံ၏ အကျိုးတို့၊ ၀တ်ရှိလို့ ခံရတယ်တို့ ဘာတို့ သိပ်ပြောကြတာ၊ ဒါတွေဟာ ဒီမိုကရေစီရဖို့
ဝေးနေတာပေါ့၊ သန်းရွှေက ဒါတွေကို သိတယ်လေ၊
ဒါကြောင့် ဘုန်းကြီးကို ရိုက်သတ်လိုက်၊ ဘုရားကို
ထီးတင်လိုက် လုပ်ပြီး လူတွေကို အုပ်ချုပ်ထားတာ
ပေါ့၊ ကျနော် ဆိုလိုချင်တာ ကိုပေါအနေနဲ့ လေ့လာ
ပါအုံးပေါ့၊ လက်ရှိ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ကိုပေါဘလော့
ရေးနေတာ ချစ်တဲ့သူ ထောက်ခံတဲ့သူ အများကြီးပါ။
အဝေဖန် မတတ်ရင် ကိုပေါ စေတနာတွေ အကုန်လုံး
မီးလောင်းသွားမှာ ဆိုလို့ပါ၊ ကျနော့်စာ အရေးအသား
ကို ကြည့်ပြီး ကျနော် ဘယ်သူလဲဆိုတာ ကိုပေါ
ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်၊ ကျနော်က ကိုပေါကို စေတနာနဲ့
ပါ၊ ဆရာလုပ်တာ လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး။
စာရှည်ရှည်ရေးမိတယ် ဆိုရင် ခွင့်လွှတ်နော် ..
Anonymous အနေနဲ့ပဲ ကော်မန့် ရေးပါ့စေ
ကျနော်က ကိုပေါလို လူချစ်လူခင် သိပ်မရှိဘူးဗျ..
ထပ်လာပြီး ရေးလိုက်ပါတယ်၊ နည်းနည်လေး ထပ်ပြော
ကျနော် ဘယ်သူလည်း ဆိုတာ ကိုပေါ ဖောက်သယ်
မချနဲ့နော်၊ ကိုပေါက ကျနော့်ထက် ကွန်ပြူတာကျွမ်း
တယ်ဆိုတာ ကျနော်သိတယ်၊ ကျနော့်ဘလော့လင့်ခ်ကို
ကိုပေါဆီက လင့်ခ်ထဲမှာ မရှိလည်းပဲ ကိုပေါကို ကျနော်
အမည်မသိ (October 18, 2009 8:42 AM).... ကွန်မင့်ကို ရှည်ရှည်လျားလျား ရေးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးပြောလိုတာက စိတ်မပူဖို့ပါ။ မိတ်ဆွေ ဘယ်သူလဲဆိုတာ ကျနော်မသိပါဘူး။ IP address တွေနဲ့ ခြေရာခံရတာ ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲဆိုတာ ကျနော် သိလည်း မသိဘူး။ စိတ်လည်း မဝင်စားပါဘူး။ မိတ်ဆွေဘယ်သူလဲဆိုတာ ကျနော်သိခဲ့ရင်တောင်မှ အမည်မဖော်ချင်လို့ Anonymous နဲ့ရေးလာခဲ့တာဆိုရင် ကျနော်မဖော်ပါဘူး။
ပြည်တွင်းမှာ နိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့ဘူးသလားဆိုတဲ့ မိတ်ဆွေမေးတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေရရင် (ဒီမေးခွန်းမျိုး အရင်ကလည်း ဖြေဖူးတယ်။) ပြည်တွင်းမှာနေစဉ်က အရေးအခင်းမှာ ဆန္ဒပြဖူးတာ၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အဖွဲ့ချုပ်ကို မဲထည့်ဖူးတာလောက်က လွဲလို့ ဘာနိုင်ငံရေးမှ မလုပ်ခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဘယ်လောက်များ လုပ်ခဲ့ဘူးပါသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ဖြေရမယ်ဆိုရင်လည်း ဘာမှဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် မလုပ်ခဲ့ဘူးပါဘူးလို့ပဲ ဖြေရမှာပဲ။ အဲဒီအချက်ကို ဘာမှ ဖုံးကွယ်ထားစရာမလိုပါဘူး။ အဲဒီလို မလုပ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်တော့ တာဝန်မကျေခဲ့သလို အခုအချိန်မှာ ခံစားရတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အခုအချိန်မှာတော့ ကျနော့်မှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ကိုယ့်ဘာသာ ယူဆတဲ့အလျောက် ကိုယ်ရောက်ရာနေရာက အတတ်နိုင်ဆုံး တာဝန်ယူပေးနေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကို ဝေဖန်ရမယ့် အချက်ကလည်း အဲဒီအကြောင်းအရာက စရမယ် ထင်တာပါပဲ။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို သုံးသပ်တဲ့နေရာမှာ နိုင်ငံရေးလုပ်ဖူးမှ၊ ထောင်ကျဘူးမှ၊ လက်နက်ကိုင်ဖူးမှ ဝေဖန်ရမယ်၊ အဲဒါတွေ မလုပ်ဘူးရင် ဝင်မပြောနဲ့ ဆိုတဲ့ မှားယွင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်ကို ပထမဦးဆုံး ပြင်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို နိုင်ငံရေးသမားတွေသာ လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုးတွေကို ပြင်ရဦးမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း။
အဝေဖန် မစောပါနဲ့ဦး ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့.... အခုမှ နိဒါန်းပျိုးရုံပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဝေဖန်တဲ့ ကဏ္ဍကို မရောက်သေးပါဘူး။
ကျနော်ဝေဖန်တဲ့အခါ ကျနော်သိတဲ့၊ အပြင်မှာ လက်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေတွေ၊ အခြင်းအရာတွေ၊ မီဒီယာကတဆင့်သိရတဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လုပ်ဆောင်နေသူတွေဆီကတဆင့် ကြားသိရတဲ့ အချက်တွေပေါ် မူတည်ပြီး ဝေဖန်မှာပါ။
လူတယောက်ဟာ သူသိတာထက် ဘယ်နည်းနဲ့မှ ပိုမရေးနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော့်ရဲ့ အချက်အလက် ကြွယ်ဝမှု၊ တွေးတောဆင်ခြင်မှုပေါ်မူတည်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ဝေဖန်ရေးဖြစ်နိုင်သလို ညံ့ဖျင်းတဲ့ ဝေဖန်ရေးလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်ရေးတဲ့အကြောင်းအရာ ခိုင်လုံမှုအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး စာဖတ်သူက လက်ခံခြင်း၊ လက်မခံခြင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်ရေးတာ မှားယွင်းသွားမှာကို ကျနော်စိတ်မပူပါဘူး။ မှားယွင်းသွားရင် အဲဒီအမှားကို ဝေဖန်သူတွေ၊ အမှန်ကို ထောက်ပြသူတွေ ကွန်မင့်ကဏ္ဍမှာ ဖြစ်စေ၊ ဘလော့ဂ်တွေမှာဖြစ်စေ ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ စာဖတ်သူအဖို့၊ ပြည်သူအဖို့ အကျိုးများနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ပဲ အတွေးအခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ၊ နည်းဗျူဟာပိုင်းဆိုင်ရာမှာ တိုးတက်လာမှာပဲ။ ကျနော်တို့လည်း ဒီလိုပဲ စကားဝိုင်းတွေမှာ ပြောကြဆိုကြ၊ ငြင်းခုန်ကြရင်းကနေ အယူအဆတွေ၊ အတွေးအမြင်တွေ ဖလှယ်တယ်၊ ပြောင်းလဲလာတယ်၊ တိုးတက်လာတယ်။ ဘာမှ မပြောဘဲ၊ မဆိုဘဲ နှုတ်ပိတ်နေရတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ Retarded Society သဘောမျိုး ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ဒီတော့ အမြဲတစေ အယူအဆတွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေကြားမှာ တွန်းတိုက်မှုတွေ၊ ပဋိပက္ခတွေ ရှိမှသာ တိုးတက်မှုလည်း ရှိနိုင်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
နောက်တချက်က ကျနော့်အမြင်ဟာ လူကြိုက်နည်းတဲ့အမြင် ဖြစ်နေမှာကိုလည်း ကျနော်မစိုးရိမ်ပါဘူး။ ကျနော်တယောက်တည်း လက်ခံတဲ့အမြင် ဖြစ်နေစေဦးတော့...ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်း ကိုယ်တွေးခေါ်မိတဲ့အတိုင်း ရေးမှာပါ။ လူ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပိုင်ခွင့် ကို ကျနော်အပြည့်အဝ သုံးမှာပါ။
ဒါကြောင့်...ကျနော့်အနေနဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့... ဘယ်သူတွေ ဘာပဲရေးရေး မရေးနဲ့လို့ ပိတ်ပင်ရန် ဆန္ဒမရှိပါ။ သူတို့ရေးတာမှာ ကိုယ်နဲ့အမြင်ကွဲလွဲတဲ့အချက်၊ ဝေဖန်စရာအချက်ရှိရင် ထောက်ပြလိုက်တာ၊ ဝေဖန်လိုက်တာနဲ့ ကိစ္စပြီးပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ ကျနော့်ဘလော့ဂ်လင့်ခ်မှာ ထည့်ထားတဲ့ လင့်ခ်တွေဟာ ကျနော် သွားဖတ်ဖြစ်တဲ့ ဘလော့ဂ်တွေရယ်၊ တကယ်လည်း ရည်ညွန်းချင် စိတ်ရှိတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေရယ်၊ ကျနော်ခင်မင်တဲ့ ဘလော့ဂါအချို့ရဲ့ ဘလော့ဂ်ကို ရွေးချယ်ထည့်ထားခြင်းမျှ ဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ကြသောအခါ အချို့ သည်ံသင့်အဆုံးအမကိုပြစ်တင်ကြကုန်၏..
ထမင်းဝ၍စာရေးနိုင်ကာအချင်းချင်းလှည့်ဖတ်ခြင်းသာလုပ်နိုင်သောblooger ၇၀၀ ခန့် ..အနက်အချို့ သည်အချင်းချင်းဆော်ရုံသာအားမရ..ပြည်တွင်းမှလူ
၅၇ သန်း ကျော်ကိုငါတို့ လောက်မှအဆင့်မရှိ
နအဖတီးကွက်တိုင်းသာကတက်ပြီး၂၁ နှစ်လုံးအခြေအနေဖန်တီးနိုင်ခွင့် ရရှိလာတဲ့အချိန်တွေမှာရန်သူ့ ကိုအလဲထိုးနိုင်သည့်ထက်မြတ်သော
comments အချို့ အပေါ်ပါ..
ဝေဖန်တာ ကောင်းပါတယ် ကိုပေါ၊ ဝေဖန်ရေးရှိမှာလည်း
စစ်တပ်က သေနတ်နဲ့ မပစ်တဲ့အချိန်မှာ ဆန္ဒတွေပြ ရဲ၊
၂၁ နှစ်လုံးလုံး ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို ဦးစားပေး ရဲ၊
နိုင်ငံရေးမှာ တိုက်ရိုက်မပါဝင်ပဲ NGO ယောင်ယောင် လုပ် ရဲ ဆိုတဲ့ ရဲ (၃) ရဲ နည်းဗျူဟာ အသစ်ပေါ့ဗျာ၊
Mg Pwa Gyi လို အဆင့်မရှိပဲ တွေးမခေါ်ရဲ တာလဲ
ရဲ တစ်မျိုးပေါ့ဗျာ ဟဲဟဲ ... စိတ်မဆိုးနဲ့နော် ကိုပေါ။
To.. Anonymous said...
October 18, 2009 11:23 AM..
great post n comments (except some stupid SPDC's proxy), please be reminded that we hv right to expose our own view on any issue bt shouldn't be wasting time by arguing. Let's prictically participate in democracy establishment in different ways as we can.
Personaly, i agree with you ko paw. Cause, we must notice that, "Democracy in Myanmar" is not only one person duty, its our duty for all burmese people.
So Now its the time for us to realize that, even we can do little things, its better than nothing to do.
About your blog, still now i agree and like your posts.......so goahead.
ပြန်ဖြေထားတာလေးအတွက်ကျေးဇူးပါကိုပေါရေ။ တင်ပြမှုတစ်ခုမှာ ဆွေးနွေးမှုတွေဝင်လုပ်ကြတယ်ဆိုတာက ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးတော့ရှိကြပါတယ်။ ကိုယ်မသိသေးတာကို သိချင်လို့ ။ကိုယ်သိတာနဲ့ ကွာ မကွာ ညှိချင်လို့ ၊ အချို့ ကတော့ရိချင်လို့ ပေါ့။ အခုဒီပို့ စ်မှာ ကျွန်မ၀င်မေးခဲ့တာတွေက ကိုယ်မသိလို့ ဆိုတာထက် discussion ကို life ဖြစ်စေချင်တာလည်းပါပါတယ်။ ဒါကလည်း ကိုပေါပြန်ဖြေထားသလို လူတိုင်း၊ စာဖတ်သူတိုင်းမှာ စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုတာကို သံသယရှိလို့ မဟုတ်ဘူးနော်။ ရှိကြတဲ့စဉ်းစားဉာဏ်တွေဆိုတာကလည်း သူ့ ခေတ်သူ့ အခါအလိုက်ရိုက်သွင်းခံထားရတဲ့ ပုံစံခွက်ထဲကအတွေးအခေါ်မျိုးတွေလည်းရှိနိုင်ကြသေးတယ်လေ။ အထူးသဖြင့် ဒီဖက်ခေတ်မှမွေးလာတဲ့ ပြည်တွင်းက လူငယ်တွေဆိုရင် သူတို့ ဘ၀တစ်လျှောက်မြင်နေကြားနေရတာတွေပဲ အဟုတ်မှတ်ကြတော့တာ။ အချို့ ကျွန်မတို့ ခေတ်က သင်ခဲ့ရတဲ့ ကဗျာတွေစာတွေဆိုရင် ဒီဖက်ခေတ်က ကလေးတွေမသိနိုင်ကြတော့သလိုပေါ့။ လူတိုင်းလူတိုင်း(မြန်မာစာဖတ်သူတိုင်း) သာမှန်မှန်ကန်ကန် စဉ်းစားတတ်ကြရင် မြန်မာပြည်လည်း ဒီမိုကရေစီရနေလောက်ပါပြီ(ကျားမြီးဆွဲမိသွားပြီလားတော့မသိ) စာဖတ်သူဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း အသက်အရွယ်၊ အသိအမြင်၊ ကျွမ်းကျင်မှုနယ်ပယ် စတာတွေကွဲပြားကြသလို သူတို့ ရွေးဖတ်တဲ့စာတွေကလည်း ကွဲသွားကြတာကိုး။ ဒီတော့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမြင်တဲ့အမြင်တွေကလည်း မတူနိုင်ကြဘူးပေါ့။ ဒါကြောင့်သာ လူအများမြင်သာတဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေတိုင်းမှာ ဆွေးနွေးချက်တွေ အသက်ဝင်လာအောင် သိပြီးသားတွေကိုလည်း လွယ်ကူရှင်းလင်းတဲ့စကားလုံးမျိုးနဲ့ ချဲ့ ကားပြီးပြန်ဆွေးနွေးကြရပါတယ်။ အဲဒီလို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဆွေးနွေးလို့ အကောင်းဆုံးဘလော့ဂ်တစ်ခုလို့ မြင်မိလို့ လည်း ဒီနေရာမှာ လာပြီးဆွေးနွေးချက်တွေလုပ်မိပါကြောင်း။ ဆက်လက်ပြီးလည်း စာဖတ်သူအားလုံး စိတ်ပါဝင်စားနိုင်မည့် ဆွေးနွေးချက်များဆက်လက်ရေးသားတင်ပြနေဦးမယ်လို့ ယုံပါကြောင်းနော်။
I prefer worship (Buddha) and
follow his logic and rational thinkings (Dhamma), learn from (Sangha) to reach the state of tranquilty (Nivana) than to
convert (change religion) to
worship some SOB or virtual entity
named Jebus or known as Zallah.
Democracy is the best practice,
but it is notareplacement for
a good Buddhist society.
Liberal Democracy copied from
the United States where there
are organizations like ACORN
has cheated votes is notasolution too. We have to cut
and paste, customized to fit
own society. Copy and granted
I dont like Than Shwe and his
gangs of mothers .... but on
the other hand I do not think
that Buddhism should not be
insulted as an attribute for
not earning democracy.
Buddhism and Democracy is most
compatible like fish and water.
Buddha never asked to submit,
or bend your ass freaking seven
timesaday, or asking to believe
a crappily written book supposed
to emailed from God@Heaven.com or
Zallah@Somewhere.com. We are told,
you earn your Nivana. Let me quote "Dont blame Buddhism for your failings, you fail Buddism".